Teny nalaina avy tamin'i Friedrich Nietzsche
Friedrich Wilhelm Nietzsche - teraka tamin'ny 15.10.1844 Oktobra 25.8.1900 tao Röcken, dia maty ny XNUMX Aogositra XNUMX tao Weimar - dia filozofa alemanina iray manan-danja izay nahitana laza malaza eran'izao tontolo izao.
Teny nalaina nataon'i Friedrich Nietzsche
Ny lahatsorany dia mitsikera foana ny fivavahana, ny fitondran-tena ary ny fiaraha-monina. Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana ny teny nalaina avy tany aminay Friedrich Nietzsche:
Ny fanabeazana dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy ambony indrindra.
Raha te hanana fanajana ny tenany ny olona iray dia tsy maintsy ho tezitra koa izy.
Ny fo no manome aingam-panahy: ary ny fanahy no be herim-po sy mangatsiaka atahorana.
Ny tena mivoatra tsara amin'ny olona dia ny finiavany fahefana.
Ny hinoako dia ny olona iray mitovy saina sy vonona vonona ihany no afaka miroborobo.
Ny Alemanina - nantsoina hoe ny olona misaina taloha: mbola mieritreritra ihany ve izy ireo ankehitriny?
Mitombo ny hadalana sy ny villain: ao anatin'ny "fandrosoana" izany.
Ny elanelana dia tsy manakana ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny fanahy.
Ny lesoka lehibe indrindra amin'ny fitsarana ny olona dia ataon'ny ray aman-dreniny.
Ny fitiavana dia ny fanjakana izay ahitan'ny olona ny zavatra amin'ny fomba tsy fahitany azy.
Ny mpamitaka ny filozofa no teny, mifangaroharo amin'ny tranokalan'ny fiteny izy ireo.
Tahaka ny masoandro, ny marina dia tsy tokony hamirapiratra loatra: raha tsy izany dia handositra amin'ny alina ny olona ary hanao azy ho maizina.
Tsy tokony hanafika ny idealiko ireo grimaces manohitra ny Semite!
Ny telo ampahatelon'ny ratsy rehetra atao eto amin'izao tontolo izao dia ny tahotra.
Misy haavon'ny fahamendrehana raikitra antsoina hoe "feon'ny fieritreretana tsara".
Tsy misy fisehoan-javatra ara-pitondran-tena mihitsy, fa fandikana moraly fotsiny ny fisehoan-javatra.
Nahafinaritra anao ve ny zavatra iray? Ka manao veloma, tsy ho avy fanindroany mihitsy izany.
Tiako ilay tia ny hatsarany: fa ny hatsaram-po no finiavana hamely sy zana-tsipiky ny faniriana.
Tianao ny hatsaranao toy ny itiavan'ny reny ny zanany; fa oviana ianao no naheno fa misy reny te-homena ny fitiavany?
Amin'ny toetran'ny fankahalana dia mampidi-doza kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy.
Mijanona ho tsara ihany ianao raha manadino.
Tsy mankahala ianao raha mbola manome lanja ambany kokoa, fa rehefa manome lanja ny mitovy na ambony kokoa ianao.
Tsy maintsy esorinao ny tsiro ratsy amin'ny faniriana hifanaraka amin'ny maro.
Tsy maintsy mangoraka sy masiaka ianao raha iray amin'ireo roa.
Lehilahy maro no antitra loatra noho ny fahamarinana sy fandreseny; ny vava tsy misy nify dia tsy mahazo fahamarinana intsony.
Miaraka amin'ny kotrokorana sy ny afomanga avy any an-danitra dia tokony hiresaka amin'ny fahatsapana mangina sy tsy matory ny olona.
Ny olona be herim-po dia resy lahatra hanao zavatra amin'ny fanaovana azy ho mampidi-doza kokoa noho izy.
Raiso am-pahatsorana ny fiteninao!
Ny fisalasalana momba ny fitondran-tena no lakilena.
Ary na izany aza - na ny zavaboary bitika indrindra aza dia ambony noho ny miresaka zavatra noforonina.
Ny finoantsika ny hafa dia manambara izay tiantsika hino ny tenantsika.
Tsy ny antony fotsiny ihany fa ny feon'ny fieritreretantsika koa dia manaiky ny fontsika mahery indrindra, ilay mpampijaly ao anatintsika.
Tokony hianarantsika amin'ny biby sy ny zavamaniry ny atao hoe voninkazo.
Tandremo ny tsara toetra! Milamina amin'izy ireo ny kamo.
Ny mangina ataon'ny ray dia miteny amin'ny zanaka lahy; ary matetika no hitako fa ny tsiambaratelon'ny rainy dia tsy hitan'ny rainy.
Mandainga foana izay tsy mino ny tenany.
Na izany aza, manompoa ny tenanao ho loharanom-piainana!
Endrey ny haren'ity tany ity amin'ny zava-bitsy, tsara sy tonga lafatra, amin'ny zava-boary!
Anisan'ny fehezin'ny tompony ny mampitandrina ny mpianany momba ny tenany.